Qalabka dib loo cusbooneysiin karo: astaamaha, isticmaalka iyo weelasha | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 22/04/2021 13:03 | Dib u warshadaynta
Markay tahay dib-u-warshadaynta, waa inaan ogaanno inay jiraan noocyo kala duwan oo qashin iyo qalab ah. Qaar badan oo ka mid ah qalabka dib loo cusbooneysiin karo waa in hore loo aqoonsadaa si loo kala saaro oo dib loo warshadeeyo. Waxyaabaha dib loo cusbooneysiin karo ayaa ah kuwa dib loo isticmaali karo ka dib isticmaalkooda ugu weyn iyadoo ay ugu wacan tahay daaweyn dib-u-warshadaynta hore. Waxay ku noqon kartaa qaabkeeda sharraxsan ee ah qaabka ugu nadiifsan.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa isticmaalka qalabka dib loo isticmaali karo iyo waxa ay yihiin.
1 Isticmaalka qalabka dib loo cusbooneysiin karo
2 Kaydinta alaabada dib loo isticmaali karo
2.1 Balaastikada iyo weelasha noocyadeeda kala duwan
2.2 Waraaq, kartoon iyo galaas
2.3 Batariyada, baytariyada iyo qalabka guryaha
Isticmaalka qalabka dib loo cusbooneysiin karo
Waxaan soo sheegnay in walxaha dib loo cusbooneysiin karo ay yihiin kuwa loo isticmaali karo ka dib isticmaalkooda ugu weyn. Marka hore waa inay leeyihiin daaweyn hore oo loo yaqaan dib-u-warshadaynta. Ama qaabkeeda loo sharaxay sida balaastigga ayaa lagu sameeyay dhalo qaabkeedii ugu sareeyay sida waa qaboojiye baabuur ama saliid, Qiime cusub ayaa la soo saari karaa ka dib nidaamka dib-u-warshadaynta. Taasi waa, waxay ku noqdaan wareegga nolosha ee alaabada.
Waxyaabaha noocan ah maahan inay mar labaad noqdaan isla waxyaabaha ka dambeeya habka dib-u-warshadaynta. Qaarkood dib ayaa loo cusbooneysiiyaa iyagoo ka faa'iideysanaya korontada hadda jirta waxaana lagu ilaaliyaa ugu badnaan ama soo saar tamar. Mid ka mid ah kiisaska ugu caansan ee loogu talagalay abuurista tamar dib-u-warshadayntu waa biomass-ka dhirta. Biomass qudaarta waxaa badanaa loo isticmaali jiray jiilka shidaalka. Qeybaha aan la cuni karin ee warshadda dib ayaa loo isticmaali karaa si looga dhaliyo tamar gubasho ama soo saarista saliidaheeda si loo soo saaro biofuels taasoo hadhow loo adeegsan doono gawaarida ama matoorrada tamarta dhaliya.
Qalabka kale ee dib loo cusbooneysiin karo waxaa loo isticmaalaa iyadoo loo eegayo sawirka caadiga ah ee aan maskaxda ku hayno. Sidan oo kale, waxaan u isticmaali karnaa dhalooyinka caagga ah si aan uga soo cusbooneysiino dhalooyinka kale ee caagga ah. Mid ka mid ah waxyaabaha dib-u-warshadaynta ugu guulaha badan waa galaas. Dhalooyinka quraaradaha si ficil ahaan ah dib ayaa loo isticmaali karaa.
Kaydinta alaabada dib loo isticmaali karo
Markaan ogaano nooca adeegsiga qalabka dib loo cusboonaysiin karo yeelan karo, waxaan arki doonnaa waxay yihiin. Thanks to horumarka tikniyoolajiyadda maanta, waxaan haynaa liis soo koraya oo ah alaab dib loo isticmaali karo oo loo adeegsan karo hal dhinac ama mid kale. Si kastaba ha noqotee, Mararka qaarkood waxaan aragnaa inaan qashinka ku hayno weelal qaldan oo isticmaalka xiga lama oggola. Tusaale ahaan, waxoogaa galaas dhigaal ah sida muraayadda muraayadda oo daaqadda ku jirta weelka dhalada ah. Qalabkan dib looma warshadeyn karo sida aan ugu sameyno dhalada quraaradaha.
Aan aragno maxay yihiin waxyaabaha dib loo isticmaali karo:
Balaastikada iyo weelasha noocyadeeda kala duwan
Weelasha noocyadooda kala duwan, ha ahaadaan leben, haamo dareere ah iyo daasadaha aluminium, dib ayaa loogu isticmaali karaa weelka jaalaha ah. Guusha cad ee loo yaqaan 'polystyrene cork' sidoo kale waa wax dib loo cusboonaysiin karo oo ay tahay in lagu rido weelka jaallaha ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aan isticmaalno joodariga dabiiciga ah, waa in lagu rido weelka cawliga ah ee walxaha dabiiciga ahi ku sii socdaan. Koofiyadaha balaastigga ah waxaa lagu shubaa jaallaha inkasta oo dhalada intiisa kale ay ka kooban tahay muraayad. Taasi waa, waxaan dhigeynaa daboolka balaastigga ah weelka jaalaha ah inta kalena weelka cagaaran.
Waraaq, kartoon iyo galaas
Way cadahay in seddexdan nooc ee walxaha dib loo isticmaali karo. Laga soo bilaabo warqad illaa weel kartoon ah waa inaan ku shubnaa weelka buluugga ah. Waxay leedahay heer dib-u-warshadeyn weyn oo dib loogu rogi karo waxay ahaan jirtay ama alaabooyin kale.
Muraayaddu waa waxyaabaha dib loo cusboneysiin karo. Si buuxda ayaa looga faa'iideysan karaa iyada oo ay ugu wacan tahay habka dib-u-celinta. Ka soo horjeedda waxa ku dhaca aluminium, geeddi-socodka ayaa lagu celin karaa inta jeer ee loo baahdo. Aluminium, wax yar iyo ka yar ayaa la soo kabsaday. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in dib loo warshadeeyo muraayadaha oo lagu rido weelka cagaaran. Waa in la xoojiyaa in muraayadaha muraayadda ama muraayadda faa'iidooyinka iyo muraayadaha aysan ku socon weelka cagaaran. Kaniisadan ugu dambeysa waxay leedahay macdanta "lead" taas oo macnaheedu yahay in si loo dhalaaliyo loo sameeyo heerkul ka duwan kan dhalada ah isla markaana aan dib loo cusboonaysiin karin si la mid ah. Sababtaas awgeed, muraayadda waa inaan lagu dhigin weelka dhalada, iyadoo aan loo kala xigsanayn midabka cawlan ee haraaga qashinka dabiiciga ah. Isla sidaas oo kale ayaa loo sameeyaa faleenka, taarikada, koobabka, iwm.
Batariyada, baytariyada iyo qalabka guryaha
Waxaa jira dhowr waxyaalood oo dib loo cusbooneysiin karo oo aan si fiican loo aqoon waxa laga yeelayo. Waa muhiim in si sax ah dib loogu warshadeeyo aaladaha teknolojiyadda iyo baytariyada awood u leh. Waa in lagu xisaabtamo in kororka tikniyoolajiyadda darteed, qashinka noocan ah uu sii kordhayo. Sidaas darteed, waxaa muhiim ah in si fiican loo ogaado meesha dib-u-warshadaynta. Waxaas oo dhan waxaa lagu ridayaa meel nadiif ah, in kastoo ay jiraan weelal khaas ah oo loogu talagalay baytariyada. Waxaa jira meelo badan oo nadiif ah oo ku yaal magaalooyinka iyo meelaha qaarkood sida suuqyada oo inta badan ay ku jiraan konteenarro loogu talagalay baytariyada.
Haddii kale, waxaad u qaadan kartaa deegaankaaga ama jardiinooyinka moobiilka meelaha loo yaqaan 'ecoparks'. Qashinka qaar sida tubooyinka iftiinka ama qalabka yar yar ayaa lagu ridi karaa meelaha mobilada nadiifka ah si aynaan ugu dhaqaaqin wax badan. Waa muhiim in laga feejignaado walxaha dib loo cusbooneysiin karo tan iyo markii qaarkood waxay leeyihiin walxo waxyeello leh oo diiradda saari kara dhulka. Shirkaduhu waxay doortaan inay isticmaalaan waxyaabo aad iyo aad u badan oo mar labaad loo isticmaali karo si loo yareeyo isticmaalka alaabta ceeriin iyo qiimaha wax soo saarka oo hooseeya. Qalabkaas aan dib loo cusbooneysiin karin ayaamohooda ayaa tiris ah. Waana midowga Yurub waxaa mamnuuc ka ah abuurista waxyaabo aan dib loo isticmaali karin sannadka 2020.
Tiknoolajiyadda iyo nidaaminta ayaa dhiirrigelinaya isticmaalka qalabka dib loo cusbooneysiin karo, sidaas darteed waa inaan kaalinteena buuxinaa oo aan wax ku darsanaa kala goynta iyo dhigaalka shay kasta oo ku jira weelka u dhigma. Sidan oo kale, waxaan gacan ka geysaneynaa yareynta cunnada alaabta ceyriinka ah waxaanna gacan ka geysaneynaa yareynta isbeddelka cimilada.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto waxyaabaha dib loo isticmaali karo, astaamahooda iyo halka aan dhigeyno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Dib u warshadaynta » Qalabka dib loo cusbooneysiin karo